Iko eriri mesikwuru resin ụlọ akwụkwọ RY720-B - China Hubei Shengyu Building Materials
FOB Price: 5.65-9.99 / square mita
Shengyu sịntetik resin ụlọ akwụkwọ, ntekwasa na Geloy ASA resin, bụ a pụrụ iche 3-oyi akwa co-extruded ụlọ akwụkwọ. Traditional ụlọ taịl ụkpụrụ na ọgaranya na agba na ìhè slab na dị mfe iji wụnye. Ọ bụ nnọọ sturdy slab, eguzogide ifufe na akụ mmiri ígwé, nwekwara ike-eji ebe a elu esthetic akpata a chọrọ. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ na-anọgide ufọk ufene ke agba na anụ ahụ Njirimara n'okpuru ultra-violet radieshon, dampness, okpomọkụ, chillness na mmetụta.
ọkpụrụkpụ obosara cover Obosara Purlin Space ogologo ibu n'elu agba
3.0 ± 0.1mm 720mm 640mm 660mm dị ka achọrọ (integer multiple nke 219) 6kg ± 0.1kg Matte ma ọ bụ Kenkowaputa Blue, Bright Red, Gray, Deep Red, Terracotta
Dị ka top oyi akwa ihe onwunwe, Geloy engineering resin mere ge bụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'ihi na n'èzí ojiji. Ọbụna gụrụ ultra-violet radieshon, dampness, okpomọkụ, chillness na mmetụta, ngwaahịa-anọgide na kwụsie ike nke na agba na anụ ahụ Njirimara. Ule ẹkenịmde ke ịka nká Test center nke Arizona na Florida na-egosi na bụ ihe na-erughị △ E 5 n'ime 10 afọ.
The elu nke ụlọ akwụkwọ bụ oké na-eji ire ụtọ, nke nwere otu mmetụta dị ka Lotus epupụta. Ọ na-adịghị banye ájá na nwere ike mfe kpochara site na mmiri ozuzo.
Magburu onwe mgbochi ibu arụmọrụ
Shengyu sịntetik resin ụlọ akwụkwọ nwere ike ike maka oké amị. The ule, ekenịmde Shanghai Municipal Building Ihe akụrụngwa Quality Supervision na Test Station, na-egosi na ọ dịghị mgbape na ọnọdụ nke 660mm akwado na-adịru na 150kg etinyere ibu.
Otu ọkọlọtọ mpempe 720mm ụlọ akwụkwọ ji 5.9 ± 0.1kg.
Environment-enyi na enyi
na China Certificate of Environmental labeling, ngwaahịa a na-egosi dịghị radieshon, volatilizable ihe na mmetọ. Ihe bụ ihe ọzọ, o nwere ike kpamkpam recycled.
Previous: ASA UPVC corrugated ụlọ akwụkwọ W1025
Next: High temperatuer & corrosion eguzogide ụlọ mpempe akwụkwọ
N'oge na-ejizi, ngwaahịa ga-agaghị-atụba ya zere emebi ihe ma ọ scratching ngwaahịa n'elu. N'ihi na otu mpempe akwụkwọ karịa 8m, ezuru naakwagide ihe ndị dị oké mkpa iji zere cracking nke tile.
Biko-ezukọta na roba waterproof mgbanaka n'ime gasket tupu gwara ndị roof.The kposara gaghị ekekọtara kwa tightly.Finally sọ waterproof cover n'elu kposara tightly.
kposara ga-dịrị ekwesị ka mpempe akwụkwọ surface.Screws na ogologo nke 75mmand dayameta nke 6.3mm na-mkpa idozi isi tile.
Shengyu resin mpempe akwụkwọ na-na ọdabara ka ụlọ pitches site 20 ruo 80.For na pitch karịrị nke a nso, pụrụ iche jikoro kwesịrị iwere n'oge echichi.
1. oche Ọdịdị
elu nke oche kwesịrị ezigbo, ihe nke oche kwesịrị nke obere deformation, na oche kwesịrị karịa 12mm oké (dị ka purlin adịru).
A 3-5mm ọdịiche n'etiti abụọ redio dị oké mkpa maka deformation.
The waterproof na-apụta ga-unrolled were were na ekwesị na ezi overlaps.
2. Steel Ọdịdị
The akụkụ nke ígwè Ọdịdị ga-kpomkwem achịkwa n'oge nhazi, nke ga-emetụta ndị pitch nke ụlọ. The ndiiche nke akụkụ ga-eme ka ihe mkpumkpu ụlọ.
Ali na steels kwesịrị mgbochi corrosion mesoo.
3. mesikwuru ihe Ọdịdị
The underlay nke ihe nwere dịghị mkpa mmetụta na evenness nke ụlọ, mgbe agbakwunyere inserts na purlins kwesịrị nnọọ mma n'anya na na a ụgbọelu.
Ma ígwè na osisi agbakwunyere inserts na purlins kwesịrị mgbochi corrosion emeso ka ịgbatị ndụ nke ụlọ Ọdịdị.
Steel purlins ga-welded na nchara agbakwunyere inserts na osisi purlins nwere ike kpọgidere osisi agbakwunyere inserts ozugbo.
Ige nti! Ọ dịghị ụlọ tile ike kpamkpam dozie nsogbu nke waterproofing site n'onwe ya, n'ihi na nkịtị ụlọ, e kwesịrị underne
1. Anti-corrosion ọgwụgwọ: Metal purlins ga-ntekwasa na otu oyi akwa nke mgbochi nchara agba na abụọ n'ígwé nke gụchara coatings. Wood purlins ga-ntekwasa na mgbochi corrosion ma ọ bụ korota mmanụ.
2. The n'elu purlin kwesịrị 180mm anya si riiji akara iji wụnye riiji taịl nile.
3. The ala purlin kwesịrị 50-70mm anya si eave.
4. The purlin ohere bụ 660mm maka Royal Ngidi.
Linear Okpomọkụ Mgbasawanye
Shengyu resin ụlọ akwụkwọ nwere a ọnụọgụ nke linear mgbasawanye nke 0.0000493 / ℃ .Mgbe iji kwe ka nkịtị linear mmụba nke mpempe akwụkwọ, anyị ndụmọdụ akuakuzinwo a oghere na n'obosara 2-3mm ibu karịa na nke ịghasa, na-eme ka ahụ gwara ka zere ihe ọ bụla dilatation nke sheet.Please anaghị eme ka nsogbu oke tightly.
Nwụnye Of Main Ngidi
Correct itinye n'ọnọdụ dị ezigbo mkpa ka n'agbanyeghị ihe ụdị ụlọ Ọdịdị, nanị na nke a nwere ike Ibé akwụkwọ ga-kpọkọtara anya na n'ụzọ kwụ ọtọ The vetikal akara kwesịrị 50 ~ 70mm na ime nke sidewall maka a gabled ụlọ, na kwụ n'ahịrị 150mm na ala purlin .
Ebe mbụ mpempe akwụkwọ dị ka nso dị ka o kwere na vetikal ewu akara, idozi n'elu mbụ tile nke abụọ vetikal n'usoro, dị ka na-akwado framework.The mbụ n'usoro ga n'okpuru ọnọdụ ọ ga-perforated.
Fixings ga-zukọtara na-efegharị efegharị crest nke tile.
Akpan akpan elekọta kwesịrị iwere mgbe kwado mbụ n'usoro n'ihi na ogologo Ibé akwụkwọ ọbụna anya lining nke a ole na ole millimeters maka nke ọ bụla mpempe akwụkwọ nwere ike ịmepụta nsogbu.
Ahụ na-aga na-eme nke abụọ nsogbu, yitewere nke abụọ mpempe akwụkwọ mpụta n'elu mbụ na idozi na onwe kposara na mbụ kasị ala tile nke kwekọrọ na yitewere.
Iji na-ezi itinye n'ọnọdụ nke fixings anyị nwere ike ikwu na ojiji nke a akara nke akwụkwọ ofu oké nke ntụhie.
Gaa n'ihu ke otu ụzọ na-atọ na-apụta Ibé akwụkwọ, na re-elele ọnọdụ nke anọ Ibé akwụkwọ, mgbe ahụ, idozi na bụla ọzọ tile.
Kpọkọtaram Ibé akwụkwọ ke otu ụzọ ruo mgbe ikpeazụ, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na obosara nke ikpeazụ mpempe akwụkwọ nwere ike a ga-ebipụ ya.
Ige nti! Ọ bụla mpempe akwụkwọ ga-kpọkọtara dị nso dị ka o kwere omume na onye overlapped.
N'ihi na nke abụọ n'usoro anyị nwere ike ikwu dị ka mgbe niile na ị na-amalite site n'aka ekpe na a mpempe akwụkwọ na-ebipụ na ọkara lengthways (ahịrị atọ nke taịl) ahụ .Nke-enye gị ohere iji nọgide na na a kwụ yitewere nke obiab ahịrị, na dị ka ndị dị otú ahụ na ị na-ezere a crossover nke anọ Ibé akwụkwọ na yitewere.
Ndị fọdụrụ Ibé akwụkwọ bee na mmalite na-adịghị n'iyi ka ha ga-eji na njedebe nke roofing dị ka mgbanwe.
Mezue n'akụkụ ke otu ụzọ.
N'ahịrị na vetikal ahịrị taịl n'akụkụ nke ọzọ gafere na ndị nke mbụ, iji ezukọta na riiji tile.
Ige nti! N'ihi na ala mkpọda ma ọ bụ na karịsịa ikuku na-eku ma ọ bụ rainly zones o kwesịrị ekwesị mechie yitewere site resin sealant ma ọ bụ sịlịkọn sealant.
N'ihi na triangle n'akụkụ nke a anọ ná mkpọda n'elu ụlọ, nke mbụ mpempe akwụkwọ a ga-malitere site n'etiti, mgbe nọgide na-ma ekpe ma ziri ezi ntụziaka.
Bee Ibé akwụkwọ, tinyere ndị hip akara asesemble diagonal riiji
The echichi nke riiji tile ga na-amalite site na otu side.For mbụ tile, ọ ga-ọkara bee izere crossover anọ Ibé akwụkwọ na yitewere.
Self-kposara na ogologo nke 75mm na dayameta nke 6.3mm ga-mkpa idozi riiji tile n'ime isi tile.Take elekọta ghara idozi riiji nso ọnu na Ya mere ghara nwere infiltration nsogbu.
Dị ka echichi nke diagonal riiji, ọ ga-kwekọọ na-ogologo na hip line.Self-kposara na ogologo nke 75mm na dayameta nke 6.3mm na-mkpa idozi prefabricated n'ọnụ isi tile.Diagonal riiji tile ga-arụnyere si ala elu na ihe yitewere nke 50mm.
Atọ ụzọ Ridge
A atọ ụzọ njikọ a na-eji dị ka isonyere mmewere n'etiti linear riiji na diagonal otu maka a anọ ná mkpọda ụlọ.
The comer kere site n'isonyere abụọ ezukọ pitches a na-akpọ valley.Position na idozi abụọ yiri ibe, 240 mm si center nke comer, ẹbiet na comer nke ndagwurugwu.
Idozi ndagwurugwu gọta mere na sịntetik resin panel ma ọ bụ metal na ibe iji onwe-kposara ma ọ bụ mbọ.
Kpaliri ndagwurugwu mpịakọta nwekwara ike-eji maka ndagwurugwu gutter.Position ya na nkuku malite na riiji akara, mwube ya ala ọma na slab.Begin idozi oké n'ọnụ nke ndagwurugwu na ibe iji onwe-kposara ma ọ bụ mbọ.
Ibé akwụkwọ kwekọrọ ekwekọ na ndagwurugwu akara ga-eji ekara tupu i, ma na-ahapụ-ekwe omume ka kpọgidere ha ọzọ, mgbe gwara, ka a n'ụzọ zuru okè ogologo ndagwurugwu akara.
Jiri sidewall egbu maramara mere na Shengyu resin panel ma ọ bụ metal, arapara na-egbu maramara osisi na mgbidi na taịl site onwe-kposara ma ọ bụ mbọ na mechie elu ọgwụgwụ nke na-egbu maramara na sịlịkọn sealant.
Iji sidewall egbu maramara mere na Shengyu resin panel ma ọ bụ metal, arapara na-egbu maramara osisi na mgbidi na taịl site onwe-kposara ma ọ bụ mbọ na mechie elu ọgwụgwụ nke na-egbu maramara na sịlịkọn sealant.
Jiri sịntetik resin ma ọ bụ metal flashings, arapara na-egbu maramara osisi na mgbidi na taịl site onwe-kposara ma ọ bụ mbọ na mechie elu ọgwụgwụ nke na-egbu maramara na sịlịkọn sealant. (Lee ihe osise n'elu)
Flashings na-atụ aro a ga-esichara na saịtị ahụ site na metal osisi, dị ka ụlọ pitches na ọnọdụ nke mpio anwụrụ ọkụ ndị agbanwe maka dị iche iche n'elu ụlọ.
Aluminom ma ọ bụ galvanized apụta nwekwara ike-eji maka njikọ n'etiti taịl nile na chimney.Stick ndị na-apụta na Ibé akwụkwọ niile gburugburu chimney.Fix na nsọtụ ọzọ nke na-apụta ka mpio anwụrụ ọkụ site mbọ na mgbe mechie elu ọgwụgwụ.
The Ibé akwụkwọ ga-kpọkọtara ke mbụ ụzọ ruo mgbe na-nso skylight.
Were kpọmkwem nha nke skylight, mee ka onye kpọmkwem oghere na mpempe akwụkwọ na a na-agbanwe polisher ma ọ bụ a obere mkpa-eze hụrụ.
Yitewere na-edu ndú mgbabere uzo maka na ala njikọ na tiled mpempe akwụkwọ na-enwe mmetụta na ọ na aka gị iji dabara mpempe akwụkwọ nke ọma.
Mgbe ahụ, ebe ahụ ekara mpempe akwụkwọ, kwesịrị ya nke ọma n'akụkụ na elu njikọ na yitewere akụkụ, na nsọtụ usụhọde ọcha na-edu ndú mgbabere uzo na ala n'akụkụ nke skylight.
Mgbe ọ gụchara nzuko nke diagonal riiji, fanye ọnụ diagonal riiji ibe n'ime ala ọgwụgwụ nke diagonal riiji, na idozi na diagonal riiji site rivets.
nnukwu ugbo mmiri Board
Curved n'elu ụlọ Ngidi
Curved roofing mpempe akwụkwọ
Fiber corrugated mpempe akwụkwọ ụlọ
Eriri Plastic ụlọ
Fiber mpempe akwụkwọ N'ihi na n'elu ụlọ
Faiba glaasi roofing Materials
Faiba glaasi Skylight Ibé akwụkwọ
Fire Retardant Plastic ụlọ mpempe akwụkwọ
Green faiba glaasi roofing
Long adịru roofing mpempe akwụkwọ
Modern Classical roofing Ngidi
Multi Agba ịkwanyere ụlọ mpempe akwụkwọ
Plain Type achara ụlọ Ibé akwụkwọ
Plastic Garage ụlọ Ibé akwụkwọ
Plastic ịkwanyere roofing mpempe akwụkwọ N'ihi na wụsịrị
Plastic ụlọ mpempe akwụkwọ
Plastic ụlọ Ngidi
Purple ụlọ Ngidi
Ịkwanyere Ihe Building Materials ụlọ taịl
Ịkwanyere Plastic ụlọ mpempe akwụkwọ
ịkwanyere Plastic ụlọ Ngidi
Ịkwanyere ụlọ mpempe akwụkwọ Profile
ịkwanyere roofing mpempe akwụkwọ
Ịkwanyere roofing Ngidi
Rain Protection roofing mpempe akwụkwọ
ụlọ Ibé akwụkwọ Price Per mpempe akwụkwọ
Roofing mpempe akwụkwọ Price
Roofing shingles Ibé akwụkwọ
Royal Plastic ụlọ taịl
Piel roofing mpempe akwụkwọ
Trapezoid ụlọ mpempe akwụkwọ
Trapezoidal Style ụlọ Ngidi
Wave roofing shingles Ibé akwụkwọ
White faiba glaasi Ibé akwụkwọ
Onodi ụlọ Ngidi
Sịntetik ASA resin ụlọ akwụkwọ RY720-A
High temperatuer & corrosion eguzogide ụlọ ...